हिमाल खबरपत्रिका | दुइटा कुखुरा कि एउटा ?
फ्रान्ज् फ्रेईको २०३३ सालको चित्र (माथि) र गएको हप्ता तारागाउँ म्यूजियममा । तस्वीरः कुन्द दीक्षित
शिक्षाविद् तथा दार्शनिक पाओलो फ्रेरेले शिक्षा नै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक अग्रगमनको कसी हो भन्दै विचार पोखेथे, सन् १९६० को दशकताका । फ्रेरेको दर्शनले प्रभावित विकास (‘डिभेलप्मेन्ट’) को पहिलो दशकतिर विदेशी सहायता संस्थाहरूलाई प्रेरित गर्यो, नेपालमा प्रौढ शिक्षाको आवश्यकता देखायो । यी संस्थामध्ये स्वीस सहायता नियोग (साटा) ले चरिकोट, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकको तामाङबहुल डाँडापाखर गाउँमा स्थानीयलाई आधुनिक युगको अर्थतन्त्र, बजार व्यवस्था र बृहत् मुलुकसँग जोड्न नेपाली भाषाको शिक्षा दिनुपर्ने निधो गर्यो । कार्यक्रमको नाम थियो ‘सघन पहाडी क्षेत्र विकास योजना’ (आई.एच्.डी.पी.) ।
सन् १९७६ मा ‘राजनीति र विकास’ का विद्यार्थी २९ वर्षीय फ्रान्ज् फ्रेई साटामा ‘इन्टर्न’ भई पाँच महीना डाँडापाखर खटाइए । चित्रकलामा हात बसेकोले उनलाई प्रौढ शिक्षाको काम दिइयो, स्थानीयलाई ‘भिजुअल लिटरेसी’ र शब्द ज्ञान दिलाउने । साटाका विशेषज्ञ सहित यस्तो चित्र शृंखला कोर्ने निधो गरे, जसले नेपाली भाषाका ४३ व्यञ्जना र १३ स्वर सबै समेटोस्, साथै गाउँघर र बजारमा चाहिने मुख्य क्रियाकलाप र चिजबिजको चित्र प्रस्तुत होस् ।
यसरी शब्द चयन भए — केरा, मामा, पोका, पसल, भान्सा, घाँस, साहु, सर्वोत्तम पीठो, आलु, तोरी, मुला, बाख्रा, दरखास्त, साझा काम, चर्पी, पशुपालन, हाम्रो देश, काठमाडौं, ई. । यी शब्द देवनागरी लिपिमा पेश गर्दै माथिबाट चित्र कोर्ने काम रह्यो फ्रान्ज्को । उनले श्यामश्वेत पेन्–एण्ड–इन्क ड्रइङ्ग बनाए । पहिलो तस्वीर कोर्दा नै उनले आफ्नो पश्चिमी परिवेश र डाँडापाखर समुदायसँगको सांस्कृतिक र सामाजिक दूरीको आभास पाए ।
फ्रान्ज्का चित्र प्रयोग गर्दै प्रौढ शिक्षा संचालन गर्न शिक्षक भर्नाको सूचना २०३३/१०/२५ को पर्चामा यसरी टाइप गरिएको थियोः “एउटा नयाँ तरिकाबाट एउटा नयाँ पाठ्यक्रम तयार पारिएको छ, जसबाट दाजुदिदीहरुले सजिलैसित पढ्न र लेख्न सिक्न सक्नेछन् । उक्त पाठ्यक्रममा उनीहरुको दैनिक जीवनका समस्याका विषयहरु राखिएका छन्, जस्तै विभिन्न बालीहरु, कृषि, स्वास्थ्य, इत्यादि ।”
फ्रान्ज्ले कोरेको पहिलो तस्वीरमै समस्या देखियो । ‘मामा’ शब्द अथ्र्याउन उनले महिला, पुरुष र बालबच्चा सहितको चित्र कोरे र गाउँघरको परिवेश झल्काउन भुई खोस्रिरहेका दुई कुखुराको आकार पनि राखिदिए ।
आज डाँडापाखरमा होस् वा अन्यत्र जो कोहीले ती दुई कुखुरा चिनिहाल्छन्, किनकि हामी सबै ‘भिजुअली’ साक्षर भइसक्यौं, गत केही दशकको फोटोग्राफी, चित्रकला, पोस्टर, पर्चा, विज्ञापन, पुस्तक र पत्रिकाका कारण ।
उतिवेला त्यस्तो थिएन, र विशेषगरी ‘थर्ड डाइमेन्शन’ को प्रत्याभूति गाउँमा बसोबास गर्ने नागरिकमा थिएन । त्यसैले फ्रान्ज्को पहिलो चित्रमा डाँडापाखरका गाउँलेले अगाडिको तेर्सो गरी उभिएको कुखुरा मात्र देखे, दायाँपट्टि दर्शकतर्फ मोडिएर चरेको कुखुरो मरिकाटे देखेनन् । फ्रान्ज्ले ती गाउँलेसँगको सांस्कृतिक र सामाजिक दूरी बुझे, जब उनले सोध्थे घरी–घरी, “एउटा कुखुरा कि दुइटा ?” र जवाफ सधैं आउँथ्यो, “यहाँ त एउटा मात्र कुखुरा छ त !”
यो भयो चार दशक अगाडिको किस्सा । फ्रान्ज् स्विट्जरल्याण्ड फर्कन लाग्दा आफ्ना चित्रहरू राख्न पाटनको एउटा फलामकर्मीलाई गोलाकार बाकस बनाउन लगाए । करियरमा मग्न भए, नेपाल फर्किएर आएनन् ।
यता भक्तपुर विकास कार्यक्रममा चार दशकअघि नेपाल आएर सम्पदा संरक्षणमा लागेका वास्तुविज्ञ निल्स् गुत्सो बौद्ध नजिक हायात होटलको प्राङ्गणमा ‘तारागाउँ म्यूजियम’ स्थापनामा जुटे । जहाँ नेपालप्रति समर्पित विदेशीहरूका विभिन्न खाले कृतिको खोजी र संग्रह गरिन्छ । गुत्सोले ५–६ वर्ष ताकेता गर्दागर्दा बल्ल गएको साता आफ्ना सबै चित्र उही फलामे ढुङ्ग्रोमा राखेर नेपाल फर्किए फ्रान्ज् र तारागाउँ म्यूजियममा प्रदर्शन शुरू भयो ।
गत बिहीवार प्रदर्शनी उद्घाटन कार्यक्रममा फ्रान्ज्ले आफ्नो अनुभव यसरी सुनाएः “डाँडापाखरका गाउँलेले किन एउटा मात्र कुखुरी देखे, मैले विश्वको ठाउँठाउँमा अनुभव बटुल्दा बुझ्दै गएँ । मध्यअफ्रिकाको घना जङ्गलमा बस्ने पिग्मी जातिले लामो दूरी कतै देख्न सम्भव छैन, रुख बुट्यान र झारपातका कारण ।
एक पिग्मीलाई केन्याको ठूलो फाँटमा लिएर जाँदा तिनले पर रहेको जङ्गली चौपायालाई सानो कीरा ठाने, र नजिकै जाँदा ‘कीरा’ भैंसी जत्रो ठूलो हुँदा चकित परे । यस्तै दक्षिण अमेरिकाको एउटा गाउँमा जनस्वास्थ्य अभियन्ताहरूले औलो रोगबारे बताउन ठूलो पर्दामा लामखुट्टेको तस्वीर देखाए । लामखुट्टे पर्दामा ठूलै देखिने भयो । कार्यक्रम सकिएपछि एक स्थानीय अगुवाले आयोजकलाई भने— हामीलाई औलोको समस्या रहेनछ, किनभने यत्रो ठूलो लामखुट्टे यतातिर पाइँदैन !”